Barcelona Mise Liverpool? Midkee Ugu Cad Cad Kulamada Champions League? Jurgen Klopp Ayaa Ka Jawaabay. - Gool24.Net
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa la waydiiyay haddii ay kooxdiisa Liverpool tahay kooxda ugu cad cad ee kulamada afar dhamaadka UEFA Champions League ee ay Barcelona la ciyaari doonaan wuxuuna Klopp ku dooday in ayna jirin koox Barcelona la ciyaaraysa oo lagu tilmaami karo in ay ugu cad cadahay.
Jurgen Klopp ayaa sheegay in uu marar badan la ciyaaray kooxda Real Madrid balse aanu wali ka hor iman Barcelona balse waxa uu sheegay in ay isku dayi doonaan in ay waxyaabaha si ka duwan u qaban doonaan marka ay Barca ku wajahaan Champions league.
Jurgen Klopp oo u waramayay DAZN ayaa isaga oo ka jawaabaya tartanka uu la gali doono kooxda Barcelona iyo sida aanu hore uga hor iman waxa uu yidhi: ” Anigu waxaan marar badan la ciyaaray Real Madrid, laakiin waligay lamaan ciyaarin Barcelona”.
Laakiin Jurgen Klopp ayaa qiray in Barcelona kooxda la ciyaaraysaa ayna ugu cad cadaan karin waligeed wuuxuna yidhi: “Waxaad doonaysaa in aad eegto waxa suurtogal ah. Waxa fiicani ee ku saabsan Barcelona waa in aanad waligaa noqonayn kuwa ugu cad cad. Si loola tacaalo doorka, laga yaabee in waxyaabaha loo qabto si ka duwan kuwa kale, waana haddii xataa anaan anigu wali si adag iyaga fikirin wax ku saabsan iyada”.
Klopp oo ka hadlaya waqtigii ay isaga iyo ciyaartoydiisa Liverpool ka soo muuqdeen Camp Nou ee ay daawadeen kulankii Barcelona iyo Borussia Gladbach ayaa yidhi: “Mar baanu Liverpool la joognay Barcelona dhexdeeda oo ahayd sararkii Chrismaska ee kulankii Gladbach, laakiin arargtida in aad garoonka joogtay oo kaliya ee ma aha in aad la tartantay, taasi xaqiiqdii muhiim ayay ahayd”.
Kadib in Liverpool, Man City iyo Tottenham ay Champions league afartiisa kooxood ee ugu danbeeya ka mid yihiin ayuu Klopp qiray in kubbada cagta England ay waqti dahabi ah ku raaxaysanayso.
Jurgen Klopp oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Guud ahaan kooxo yar ayaa isbadal ka wayn samaynaya. Real Madrid waxay iibisay Cristiano, Bayern Munich waxay samaynaysaa isbadal shaqaalaha ah, England dhexdeeda afarta sare waxay leeyihiin qaab dhismeed da’ahaaneed oo fiican. Dabcan waxaa jira dhawr sababood oo kale ee sababta ay ciyaartoy fiicani halkaas England u joogaan”.
” Kubbada cagta England way fiican tahay, sidoo kale waxaa fiican kooxda qaranka, dhamaan lixda sareba aad ayay u fiican yihiin laakiin taasi marnaba hubaal kama ah mustaqbalka” ayuu Klopp hadalkiisa sii raaciyay.